Dardaaranka daryeelka caafimaadka (Health care directive forms in Somali)
Diyaar u nogo oseysinta rabitaankaga ee daryeelka caafimaadga
Dardaaranka daryeelka caafimaadka waxey dadka ku daryeelayo siisa macluumaad ku saabsan waxaad rabtid in laguu qabto, hadii xanuun ama dhaawac kaa horjoogsado oo adigu aad awood u weydo inaad sheegato.
Gobol Kasta wuxuu u bahaan yahay waaraqo (forms) xoogaa kale duwan:
Minnesota: Dardaaranka daryeelka caafimaadka
Wisconsin: Dardaaranka daryeelka caafimaadka
Markii aad daabacdid PDF ka, fadlan qoraalka PDF ka ah hal dhinac waraaqaha uga daabac. Waraaqahaan rasmiga ah waxaa lagu daraa diwaanka caafimaadkaaga ee elektaroonik ah.
Markii aad PDF ka daabacdid oona buuxisid labo qof oo marqaati ah ha saxiixaan ama nootaayo dadweyne (notary public) ha sharciyeeyo. Kadib sii sawirka (koobiyada) waraaqda daryeel bixiyahaaga ama wakiilada daryeelka caafimaadka.
Qorsheynta hormariska ah ee daryeelka caafimaadka
Allina Health waxay leedahay dardaaran daryeel caafimaad oo ammaan ah oo internetka ku jira oo aad buuxin kartid. Tag allinahealth.org/acp oo is qor Xisaabtayda ka Furan Allina Health (My Account with Allina Health).
Waxa kale oo aad tagi kartaa fasal bilaash ah oo ku saabsan sida loo buuxiyo dardaaran daryeel caafimaad. Fiiri liiska fasalka ee ku yaala allinahealth.org/acp amawac 612-262-2224 si aad isu qortid.
Ixtiraamka qaderinta dabayaaqada nolosha qofka